Tankers (2018) | MM Movie Store
ဒီတဈခါရုရှားတငျ့battleကားထဲမှာတော့ အရငျတဈခါကအောငျမွငျကြျောကွားခဲ့တဲ့ တီ-၃၄တငျ့မဟုတျတော့ဘဲနဲ့KV Tank ကဗှေီတငျ့တဈစီးနဲ့ပတျကွမျးခဲ့တဲ့ တငျ့တိုကျပှဲဇာတျကားဖွဈပါတယျ…ဒီဇာတျကားဟာတဈကယျ့အဖွဈအပကျြပျေါမှာအခွခေံပွီးရိုကျကူးခဲ့တဲ့ဇာတျကားလဲဖွဈပါတယျ…
ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ Semyon Konovalovဟာအစောပိုငျးမှာ နယျမွစေိုးမိုးနတေုနျးအမှတျမထငျဘဲရနျသူ့ပနျဇာတငျ့တဈစီးရဲ့ခြုံခိုတိုကျခိုကျခွငျးခံလိုကျရတယျ…အဲ့နောကျမှာ Konovalov ဟာကံကောငျးထောကျမစှာအသကျရှငျကနျြခဲ့ပွီးတပျရငျးတဈရငျးကိုပွနျရောကျလာခဲ့တယျ…
အဲ့မှာသူနဲ့ကြောငျးနဖေကျအတနျးဖျောဖွဈခဲ့တဲ့ဗိုလျမှူးတဈယောကျနဲ့ကွားမှာ အဖုအထဈလေးတှရှေိခဲ့ပွီး သူ့ကိုသုံးစားမရတဲ့ကဗှေီတငျ့အဟောငျးတဈစီးကိုပေးအပျခဲ့တယျ…
Konovalov လဲရှိတဲ့ပစ်စညျးနဲ့ကောငျးအောငျပွငျဆငျနတေုနျးတဈနမှေ့ာဗိုလျမှူးက ရှတေ့နျးတဈနရောကို ကငျးထောကျထှကျဖို့ Konovalov အားတာဝနျပေးအပျလာတဲ့အခါမှာတော့…တငျ့အဟောငျးကွီးရနပေမေယျ့ သူဘယျလိုပတျကွမျးခဲ့မလဲဆိုတာကိုတော့ စဈကားကွိုကျသူတို့ ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး
ဒီတစ်ခါရုရှားတင့်battleကားထဲမှာတော့ အရင်တစ်ခါကအောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တီ-၃၄တင့်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့KV Tank ကေဗွီတင့်တစ်စီးနဲ့ပတ်ကြမ်းခဲ့တဲ့ တင့်တိုက်ပွဲဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်…ဒီဇာတ်ကားဟာတစ်ကယ့်အဖြစ်အပျက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလဲဖြစ်ပါတယ်…
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Semyon Konovalovဟာအစောပိုင်းမှာ နယ်မြေစိုးမိုးနေတုန်းအမှတ်မထင်ဘဲရန်သူ့ပန်ဇာတင့်တစ်စီးရဲ့ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခြင်းခံလိုက်ရတယ်…အဲ့နောက်မှာ Konovalov ဟာကံကောင်းထောက်မစွာအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ပြီးတပ်ရင်းတစ်ရင်းကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်…
အဲ့မှာသူနဲ့ကျောင်းနေဖက်အတန်းဖော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးတစ်ယောက်နဲ့ကြားမှာ အဖုအထစ်လေးတွေရှိခဲ့ပြီး သူ့ကိုသုံးစားမရတဲ့ကေဗွီတင့်အဟောင်းတစ်စီးကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်…
Konovalov လဲရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်နေတုန်းတစ်နေ့မှာဗိုလ်မှူးက ရှေ့တန်းတစ်နေရာကို ကင်းထောက်ထွက်ဖို့ Konovalov အားတာဝန်ပေးအပ်လာတဲ့အခါမှာတော့…တင့်အဟောင်းကြီးရနေပေမယ့် သူဘယ်လိုပတ်ကြမ်းခဲ့မလဲဆိုတာကိုတော့ စစ်ကားကြိုက်သူတို့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး
Fatherhood(2021) – Link 2
Fatherhood(2021) – Link 1
Skater Girl 2021
Rogue Hostage (2021) – Link 2
Rogue Hostage (2021) – Link 1
ပြျောပှဲစား ပါတီ – Link 3
ပြျောပှဲစား ပါတီ – Link 1
Mr. Robot (Season 1) အပိုငျး (၁၀)
The Magicians – Season2(Episode 9)
Mr. Robot (Season 3) အပိုငျး (၂)